Wasaaradda Warfaafinta oo dib u howlgelisay naadiga Madbacada Qaranka | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Wasaaradda Warfaafinta oo dib u howlgelisay naadiga Madbacada Qaranka
Wasaaradda Warfaafinta oo dib u howlgelisay naadiga Madbacada Qaranka
Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya, ayaa dib u howlgelisay naadigii Madbacada Qaranka muddo dhowr iyo labaatan sanno kaddib, iyadoo munaasabadda hirgeliyey lagu qabtay Muqdisho.
Munaasabadda dib u howlgelinta naadiga Madbacadaha Qaranka oo hoostagta wasaaradda Warfaafinta, ayaa Madasha lagu howlgalinayeyna waxaa goob-joog ka ahaa wasiirka Warfaafinta, Xiriirka Guddiga Kubadda Cagta, Maareeyaha Madbadaha Qaranka iyo qeybaha ay naadiga ka kooban tahay.
Guddoomiyaha naadiga Madbacada Qaranka Cumar Maxamuud Nuur (Mugaanbe) ayaa ballan qaaday in ay si joogta ah ula shaqeyn doonaan wasaaradda Warfaafinta.
Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed C/qani Saciid Carab ayaa soo dhoweeyey in wasaaradda warfaafinta ay muddo dheer kaddib dib u howlgeliso naadigii Madbacadaha Qaranka.
Agaasimaha Guud ee wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya C/raxmaan Yuusuf Cumar (Cadaala) ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku dedaali doonto sidii loo Tayeyn lahaa Naadiga Macbadaha Qaranka.
Wasiir ku xigeenka Dhalilnyarada iyo Ciyaaraha Axmed Cumar Isloow iyo wasiir ku xigeenka Warfaafinta C/raxmaan Iidaan Yoonis ayaa labaduba sheegay in iskaashiga badan laga yeesho sidii loo xoojin lahaa awoodda Naadiga.
Ugu dambeyn wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska C/raxmaan Cumar Cusmaan (Yariisow) ayaa yiri “tani waa taariikh dalkeennu leeyahay, wasaaradda waxaa ka go’an in ay dib u soo nooleyso dhammaan taariikhdeedii lagu yaqaanay naadiguna ay si xooggan u taageeri doonaan.
Munaasabadda inta ay socotay ayaa lagu kala saxiixdey heshiis saddex geesood ah uu u dhaxeeyey wasaaradda, naadiga iyo xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed, kuna aaddan dib u howlgelinta naadiga Madbacada Qaranka.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo kulamo la qaatey Masuuliyiinta iyo Shacabka Galmudug.
Next articleR/W Khayre oo shir gudoomiyay kulan looga hadlayey arrmaha gar-gaar ee bini-aadanimadda Soomaaliya.